January 22, 2021 - Online Hartha
ဝိတျခနြသေူတှအေတှကျ အထိရောကျဆုံး တဈရကျကို (၁)ပေါငျနှုနျး ဝိတျကစြတေဲ့ ဂငျြး-ပနျးသီးရညျ
January 22, 2021 by Online Hartha
ဝိတ်ချနေသူတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံးအရည် တစ်နေ့ တစ်ပေါင်ကျ You Tube မှာ ဒီအရည်-၁ ပတ်သောက်တာနဲ့​၁ ပတ်တွင်း ပေါင် (၃၀) ကျတယ်တဲ့ ၃၀ကတော့သူတို့ လျှောက်ပြောတာပါ အရည်ကလုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်လို့ (၃၀) မကျလဲ ကျချင်သလောက်ကျဆိုပီးသောက်တာ တစ်နေ့တစ်ပေါင်နှုန်းတော့ကျနေတယ် ဒါတောင် နေ့လည်ပိုင်း ဆီကြော်စာတွေ စားဖြစ်နေတာ မနက်ခင်းအစာမစားခင် နာရီဝက်အလိုသောက်ပေးရတယ်။ လုပ်နည်း-ပန်းသီးတစ်လုံး/ဂျင်းလက်တစ်စစ်ကို ရေသန့်ဘူးတစ်ဝက်ထည့်ပီး၁၀ မိနစ်ကျိုပီးရင် ရလာတဲ့အရည်ရောကြိတ် ပီး သောက်ယုံပဲ သူတို့ကတော့ရေ၁ လီတာထည့်ခိုင်းတာ ၁ လီတာက အရမ်းကျဲလို့တစ်ဝက်ပဲ ထည့်လုပ်တယ်။ သူများတင်ထားတာတွေ့လို့ပြန်sharingလုပ်ပေးတာ Unicode Version ဝိတျခနြသေူတှအေတှကျ အထိရောကျဆုံးအရညျ တဈနေ့ တဈပေါငျကြ You Tube မှာ ဒီအရညျ-၁ ပတျသောကျတာနဲ့​၁ ပတျတှငျး ပေါငျ (၃၀) ကတြယျတဲ့ … Read more
အသီးပဲစားနကွေတာ အရှကျနဲ့လဲ သငျ့အိမျဟာ ကံကောငျးခွငျးနဲ့ ပွညျ့စုံနပေါပွီ
မာလကာရွက် အသီးပဲစားနေကြတာ အရွက်လည်း အသုံးဝင်ကြောင်း လူတွေ သိပ်မသိကြဘူး မာလကာအရွက် အိမ်မှာစိုက်ထားရင် သင့်အိမ်ဟာ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေပါပြီ ဘယ်လိုတွေ အသုံးဝင်လဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် မာလကာအရွက်ဟာ ခံတွင်းနံ့ဆိုးတဲ့သူတွေ သွားပိုးစားလို့…အစာဟောင်းတွေ ညှပ်နေရာက အနံ့ဆိုးတွေ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အနံ့ဆိုး အရက်သောက်လို့ ထွက်တဲ့အနံ့ဆိုး ရှိတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်… ခံတွင်းနံ့ဆိုးရှိသူတွေအတွက်…ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် အရွက်ကို ရေဆေး ဝါး လိုက် ပြီး ထွေးထုတ်လိုက်ရုံ မွေးပျံ့တဲ့ရနဲ့ ခံတွင်းကို ပြန်ရစေနိုင်ပါတယ် သူ့အရွက်က အဆီက ခံတွင်းနံ့မွေးအောင် စွမ်းနိုင်လို့ပါပဲ ခံတွင်းနံမွေးတော့စကားပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရနိုင်ပါတယ် မဟီဒွန် တက္ကသိုလ်က စမ်းသပ်ချက်အရ မာလကာရွက်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခံတွင်းဆေးရည် သုံးတဲ့ အယောက် ၇၀ ဟာ သားဖုံးယောင်တာတွေကို ပြန်လည် သက်သာစေပါတယ်တဲ့ … Read more
အက္ခရာလေးလုံး ငွေဝင်ယတြာမီးတိုင် စီရင်နည်း
အက္ခရာလေးလုံး ငွေဝင်ယတြာမီးတိုင် (တင်ဖူးပေးပြီး အသူံးတည့်တာကြောင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်) ဒီတခါတော့ စီးပွားလာဘ်ပွင့် ငွေဝင်မီးတိုင် စီရင်နည်းကို ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်…. ကိုယ်တိုင် စီရင်အသုံးပြုတဲ့ နည်းဖြစ်သလို လက်တွေ့စီရင်အောင်မြင်နေကြဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စွာ သူံးစွဲနိုင်ပါတယ် …… စီရင်နည်း အနေနဲ့ကတော့ မိမိ လက်ဝါးအရှည်ထက်မလျော့တဲ့ မိးတိုင်မှာ စီရင်ရမှာပါ …. ပုံပါအက္ခရာများ အတိုင်း ရေးသားစီရင်ရပါမယ် … အက္ခရာ တလုံးဆွဲတိုင်း ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အစအဆုံးရွတ်ဖတ်ရပါမယ် ….. အက္ခရာ လေးလုံး ရေးသားပြီးပါက မီးတိူင်ကို …. “ဥုံ သိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ မဟာသိဒ္ဓိ အပေါင်း ထောင်သောင်း ထက်ဆရာထက် ” ထို မန္တာန်ကို ၉ ခေါက် ၃ ကြိမ် ရွတ်ဖတ်ရပါမယ် ….. အလုံးစုံ … Read more
အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေးများအတွက် ၂၀၂၁လမ်းညွှန်…
အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို လူကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ အရင်တုန်းကလို ကလေးဆန်နေလို့မဖြစ်တော့သလို တာဝန်ယူစရာတွေ၊ ဘဝအတွက် လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါပြီ။ ဒီတော့ ၂၀၂၁ ထဲ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဖို့ ဘယ်လိုအရာတွေကို လုပ်သင့်နေပြီလဲဆိုတာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သေချာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်း အလုပ်စလုပ်တတ်ကြတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကစလို့ ၂၃ နှစ်လောက်အထိက ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုကို ဟိုခုန်ကူး၊ ဒီခုန်ကူးနဲ့ ကိုယ်နဲ့အံဝင်ခွင်က ဖြစ်၊မဖြစ်ဆိုတာကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ သင့်နေသေးပေမယ့် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာတော့ ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လို career မျိုးကိုရွေးသင့်တယ်ဆိုတာ သေချာသိပြီးတော့ တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေမယ်နော်။ (၂) ကျန်းမာရေးလိုက်စားပါ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၂၅ … Read more
သမ္မာအာဇီဝဖြင့် ငရဲယူနေကြသူများ ငှက်ပျောသီးသည်အစားအသောက်မှာမှ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးက မြန်မာပြည် မှာ ရောင်းရအကောင်းဆုံး စာရင်းထဲက အရာ။ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးက ခွန်အားကို ဖြစ်စေတယ်။ မွေးပြီးလသား ကလေးအရွယ်မှ စကာ လူရွယ်၊ လူလတ်၊ သက်ကြီး ပိုင်းတွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေလို့ စားကြ တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ဗားဂရာ ကမ်းနားမှာ ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီးဒိုင်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ သည်နေရာကမှ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြို့ နယ်အသီးသီးကို ဖြန့်ချိတယ်။ ပွဲထိုး၊ နတ် ဆက်တဲ့ ရေသီ ငှက်ပျောသီး ယူမလား (ရခိုင်ငှက်ပျောလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်) ၊ ဖီး ကြမ်း၊ သီးမွှေးနဲ့ ရွှေငှက်ပျောသီး တွေရတယ်။ ရာသီပေါ်ဖြစ်တဲ့ သရက်သီးနဲ့ ကြံ တို့ကိုလည်း သည်ကမ်းနားကပဲ ဖြန်ချိ တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ … Read more
တကယ်လို့ ဒီဟင်းတွေကျန်ရင် လုံးဝပြန်နွှေးမစားကြနဲ့နော်…
လုံးဝ ပြန်နွေးမစားသင့်သည့် ဟင်း ၊အစားအစာလေးများ ၁။ ဟင်းနု နွယ်ရွက် (Spinach) ချက်ပြီးသားဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို ပြန်နွှေးပြီး မစားသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထဲမှာပါတဲ့ နိုက်ထရိတ်(nitrates) ဓာတ်ဆားကြောင့်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ချက်ထားတဲ့ဟင်းနု နွယ်ရွက်ကို နွှေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နိုက်ထရိတ် ဓာတ်ဆားကနေ နိုက်ထရစ် အက်စစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး အဲ့ဒီ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ နိုက်ထရစ်အက်စစ်ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…။ ၂။ တရုတ်နံနံကြီး (Celery) လူတွေဟာများသောအားဖြင့် တရုတ်နံနံကြီးရွက်ကို ဟင်းအရည်သောက်လုပ်စားတဲ့အခါမှာထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့လိုလုပ်စားမယ်ဆိုရင်လုပ်ထားတဲ့ အရည်သောက်ဟင်းရည်ကိုတစ်ခါတည်း ကုန်အောင် စားပစ် သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ ပြန်အပူပေး၊ ပြန်နွှေးစားမယ်ဆိုရင်လည်း တရုတ်နံနံကြီးအရွက်တွေကို ဖယ်ပြီးမှ နွှေးစားသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုးကျိူးဟာလည်း ဟင်းနု နွယ်ရွက်လိုပဲ။ နိုက်ထရစ်အက်စစ်ကနေ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…။ … Read more
သင့်ရဲ့ နှာခေါင်းပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ စိတ်နေ၊စိတ်ထားအကျင့်စရိုက်များ
လူတစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ နှာခေါင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်နော်။ စာဖတ်သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူနိုင်မယ့် နှာခေါင်းပုံစံလေးတွေကို မျှဝေပေးပါမယ်… ၁။ နှာခေါင်းကြီးကြီး နှာခေါင်း အတိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှည်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နှာခေါင်းကြီးတာမျိုးရှိပါတယ်။ နှာခေါင်းထိတ်နားမှာ ကျယ်ပြီး နှာပေါက်လည်း နည်းနည်းကြီးပါတယ်။ နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေဟာ အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတ္တကြီးပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိကြပါတယ်။ နှာခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သူဌေးကပေးတဲ့ အမိန့်ကို မနာခံချင်ကြပါဘူး။ ၂။ နှာခေါင်းသေးသေး နှာတံသေးတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ကူးတီထွင်ဥာဏ်ကောင်းပြီး အုပ်စုလိုက် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ထူးချွန်တဲ့သူတွေပါ။ တခါတလေမှာတော့ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး စိတ်ပျက်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုလို နှာခေါင်းသေးတဲ့သူတွေဟာ အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်စိတ်ရှိကြတယ်။ သူတို့အပေါ် ခက်ခက်ခဲခဲ အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ နှာတံရှည်ရှည် နှာတံရှည်တဲ့သူတွေဟာ စီးပွားရေးအမြင်ရှိတယ်၊ ချက်ကျလက်ကျ တွေးခေါ်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ … Read more
လငျမယား မကွာခဏ စကားမြား ရနျဖွဈခွငျးဘေးမှကငျးဝေးစရေနျ
အိမ်တွင်းအပူတွေငြိမ်းပြီး လာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းစေရန်… လင်မယား မကြာခဏ စကားများ ရန်ဖြစ်ခြင်းဘေးမှကင်းဝေးစေရန် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရမည့် ယတြာလေးလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ယတြာနည်းလမ်းလေးကတော့ လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါတယ် ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေရမှာကတော့ သံပုရာသီးအဝါရောင်တစ်လုံး နဲ့ လေးညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်ကို မဖြစ်မနေရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့ သံပုရာသီးအဝါတစ်လုံးအား အလယ်တည့်တည့်မှ ထက်ခြမ်းခွဲပြီး သံပုရာသီး အသားထဲသို့ ရှာဖွေထားသောလေညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်စီကို စနစ်တကျ စိုက်သွင်းကာ အိမ်အဝင်ပေါက် တံခါး ဘေးတဖက်တချက် ထားပြီး သောကြာနေ့မနက်ပိုင်း ပြုလုပ်ပါ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီး တပါတ်လောက်ကြာမြင့်ပြီး သောကြာနေ့တွင် သင့်ရာနေရာ၌ စွန့်ကာ အသစ်ထပ်မံနောက်၁ကြိမ် ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သုံးကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပြီးပါက သင့်တို့ထံတွင်ရှိနေသော အညံ့များ သိသိသာသာ ပြေလျော့သွားသည်ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ကျနော်ပြောသော ယတြာနည်းလမ်းလေးကို သင့်ဆွေမျိုးများအား ပြန်လည်မျှဝေကုသိုလ်ပြုလိုက်ကြပါ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ…။ Unicode Version အိမျတှငျးအပူတှငွေိမျးပွီး … Read more
ရာထူးတကျ ငှကွေေး၊အခကျအခဲကို အောငျမွငျစသေော အစီအရငျ
ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင် လိမ္မော် ရွှေထီး ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ရာထူးတိုးတက်လိုသူများ /ကံနိမ့်၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသူများ /အိမ်တွင်းရေး အပူသောကများနေသူများ/ ဈေးဆိုင်ရောင်းမကောင်းသူများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကံတက်ပြီး လာဘ်ပွင့်စေသော အစီအရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁. ပြုလုပ်ရမည့် အချိန်က.တနင်္လာနေ့ နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ်ပါ။ ၂. ပြုလုပ်ပုံကတော့ ကြွေပန်းကန်ပြားထဲ လက်ဖက်အစိုကိုအောက်က ခင်းပြီး လိမ္မော်သီး ၃လုံးမှာ ရွှေထီး ၃လက်စိုက်တာပါ။ လိမ္မော်သီးက မည်သည့်လိမ္မော်အမျိူးအစား မဆို ရပါတယ်။ ၃. ဘုရားလှူရသည် မဟုတ်ပါ။ အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ အမြင့်တစ်နေရာမှာ ထားပါ။ ၄. စွန့်ရမည့်အချိန်က သောကြာနေ့ ည ၉နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်နဲ့ ရွှေထီးကို စွန့်ပစ်ပါ…။ လိမ္မော်သီးကို ခွာ၍ … Read more
အိမ်ထောင်သည် အမကြီး တစ်ယောက်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပြီ
အမကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ… နောက်အိမ်ထောင် ပြု တဲ့ ဖခင် ၊မိခင်တိုင်း လိုလို အများစု ဘဝဇာတ်သိမ်း မကောင်းကြပါဘူး …။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ ကို အသနားပိုပြီး သားသမီး များက ပို ချစ်ကြတယ် …။ အသိစိတ်က အဖေ အမေ ဆိုပေမယ့် မသိစိတ်ကကြည်ညိုလို့ မရတဲ့ ဖခင်၊မိခင် ဖြစ်နေတာပါ …။ အသိစိတ်က သွေးသား တော်စပ်ပေမယ့် မသိစိတ်က သူစိမ်းတစ်ယောက် လိုဘာ ခံစားချက်မှမရှိသလောက် ဖြစ်နေတော့တာပါ …။ အသက် အရွယ် ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ သား ရင်း သမီး ရင်း ဆိုတာ အနား မှာ ကပ်ကြမှာ … Read more